“Raharaha 7 febroary” : fombafomba fotsiny sisa ny fahatsiarovana isan-taona | NewsMada
“Raharaha 7 febroary” : fombafomba fotsiny sisa ny fahatsiarovana isan-taona
Hatramin’izao, mbola ifandroritana ny “Raharaha 7 febroary“, taona 2009. Inona ny marina? Fototry ny zava-nitranga ny diaben’ireo mpanao fihetsiketsehana politika, niainga teny amin’ny kianjan’ny 13 mey hanatitra “Praiminisitra” teny amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra.
Tifitra variraraka tampoka no setrin’izay, na teo aza ny fifandresen-dahatry ny mpitarika hetsika sy ny mpitandro filaminana. Tsy nisy ny fampandrenesana sy fampitandremana mialoha, araka ny fomba miaramila: tifi-danitra fanaparitahana olona, ohatra.
Mbola ifandroritana koa ny hoe: avy aiza marina ny nisian’ny tifitra? Tsy misy fanadihadiana. Iza no tena tomponandraikitra na atidohaben’ny fandripahana olona? Tsy fantatra. Nahoana no naterina teny Ambohitsorohitra fa tsy Mahazoarivo ny “Praiminisitra“?
Na izay tena isan’ny maty na tsy hita popoka aza, tsy fantatra mazava. Toy izany koa ny amin’ireo naratra sy mitondra takaitra.
Mampiady ny fitsarana ny raharaha
Nisy ny didim-pitsarana momba ny “Raharaha 7 febroary“, aogositra 2010. Notsaraina tamin’izany ny mpitondra tamin’ny fotoan’androny. Nefa mampiady… Tsy to teny amin’ny didy navoakany ny fitsarana? Lazain’ny sasany fa didim-pitsarana politika no natao, tao anatin’ny fitondrana tsy ara-dalàna… Tokony ho Fitsarana avo ho an’ny mpitondra fanjakana, na fitsarana ady heloka bevava tsotra aza.
Mbola misy ny fangatahana fampiakarana fitsarana ambony, na fitsarana iraisam-pirenena, na fanadihadiana iraisam-pirenena… Tsy hita izay tohiny sy farany. Inona ny marina? Mila fanadihadiana. Hisy ve ny fahasahiana ho amin’izany? Na ho fampahalalana ny marina ho an’ny taranaka amin’ny maha tantaram-pirenena azy ihany aza…
Tsaroana isan-taona toy izao ny “Raharaha 7 febroary“. Saika fombafomba fotsiny sisa ny fahatsiarovana na fahazarana… Miseholany ny fifandroritana, tsy fitoviam-pijery. Maty foana izay maty? Toy ny tamin’ny 13 mey 1972, 10 aogositra 1991… Tsy fantatra, na tsy hadihadiana, na afenina ny marina. Miandry ny tantara hoe hitsara?